Tuesday October 22, 2019 - 08:02:46 in Wararka by Super Admin
Mu'asasada Almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacidada Jaziiradda carabta ayaa soo saartay isdaar maqal iyo muuqaal ah oo lagusoo bandhigayo kooxo jawaasiis dilayaal ah oo u shaqeynayay cadowga alle.
isdaarkan oo ladaawan karo muddo hal saac iyo qadar 16 daqiiqo ah ayaa lagusoo bandhigayaa dhagaro halis ah oo jawaasiistu ay umaleegayeen shacabka muslimiinta, kooxaha jawaasiista ah ee lasoo bandhigay qiraalladooda ayaa badankood u shaqeynayay dowladaha Mareykanka,Aala sacuud iyo imaaraatka carabta kuwaas oo usha uhaya xamlada saliibiga ah ee lagu qaaday caalamka islaamka.
Hoggaamiyaal katirsan mujaahidiinta alqaacidda ee Jaziiradda carabta oo kasoo muuqanaya filimka ayaa umadda muslimka ah iyo madaxda jamaacaadka jihaadiga ah ugu baaqaya in ay si adag ula tacaamulaan jawaasiista indhaha u ah cadowga.
qeybaha dambe ee isdaarka ayaa lagu daawanayaa mujaahidiinta oo gummaadaya qaar kamid ah kooxihii jawaasiista ahaa ee lagusoo bandhigay sedaxda xalqo ee silsiladda burburinta basaasnimada.
Mujaahidiinta alqaacidda ee ka jihaada dhulka jaziiradda carabta ayaa lakulmay imtixaanaad farabadan waxayna mujaahidiintaas lahalgamayaan cadow jinsiyo kala duwan leh.
Filimka Toos ugu Daawo Facebook